Ofdị usoro na ihe ha bụ maka
Usoro bụ usoro nke ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ, ya bụ, ịnyefe ma ọ bụ gbanwee usoro.
Ọ dị ka ọ bụrụ na n'oge elektrọnik ị banyela n'okirikiri, mana ọ dị mkpa ka dị mkpa, ebe ọ bụ na ihe ọ bụla e kere eke nke a ga-eburu na ụgbọelu nkịtị ga-achọ usoro, n'agbanyeghị etu ha siri dị.
A mụọla akụkụ dị iche iche kemgbe oge ochie ma ha ga-abụkwa otu n'ime akụkụ ndị dị mkpa na ngalaba gị dịka onye na-emepụta ihe.
Injinia, mechatronics, robotics chọrọ usoro. Ego ole ka ịmara ma ghọta etu iwu anụ ahụ si arụ ọrụ, ihe ha bụ maka otu ha si arụ ọrụ, ọtụtụ nhọrọ dịgasị iche iche na usoro ọhụụ emegharịrị maka ọrụ gị ga-enwe ike ịmepụta.
A lever bụ usoro, cam, ihe Archimedean screw. Anyị ga-abanye ụwa na-adọrọ mmasị. Ọ bụghị naanị na ha bara uru maka ihe ndị e mepụtara, ndị na-eme ya, ndị na-ese ihe na ọtụtụ guild ndị ọzọ kwesịrị ịma maka ha ọbụlagodi na ha amatabeghị ya.
Pesdị, nhazi na ihe atụ nke usoro
Square Oghere malite ịgba Bit
Eduardo Mier adọla m aka ná ntị banyere vidiyo na-akpali agụụ mmekọahụ ọ chọrọ igosi gị. Ọ bụ mkpọpu ala nke ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Fewzọ usoro ole na ole
Site na njikọ nke UJI (Universitat Jaume I) Ọfọn anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ mmemme nke usoro anyị tụlere ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Ihe mbulele ndi mmadu twitter nke ahu enyerela m aka na ntughari aha Trammel nke Archimedes, nke n'ikpeazụ nọgidere dị ka Archimedes Compass. Anyị atụlewo «Archimedean trammel» na ụzọ ọzọ «Archimedean Lattice».
Ọtụtụ ekele @February 1, @nwanyi, @ Nwachukwuonyeka na onye chọtara ntụgharị asụsụ @ScienceKanija
Ya mere, ka anyị lee ihe anyị nwere ike ime
Mmezi nke Jansen na okike ya
Anọ m Geometry di omimi na vidiyo nke usoro Jansen.
Awa ọhụrụ mepere emepe iji chọpụta. A mụrụ chi ọhụrụ ife ofufe :)
Olee otú ime ka n'ibu afụ ọnụ
Anyị hụrụ nke a dị ebube n'ibu afụ ọnụ, nke na-egosi anyị na ọ bụghị ihe ukwu ịnweta teknụzụ dị elu ma ọ bụ ọtụtụ akụ, iji nweta nsonazụ dị ịtụnanya.
Anyị dị nnọọ mkpa a otutu pụrụ ichetụ n'echiche :)
Otu esi eme mmiri iyi Heron
Anyị ahụla Clepsydras, na Eolipilla ma ọ bụ Aeolus nke Heron, ma anyị ahụbeghị ya Ogba mmiri nke Heron bụ igwe hydraulic nke Heron nke Alexandria kere (XNUMXst physicist, mathematician and engineer) An-oge kpochapụwo nke ihe omimi mmiri.
Ihe odide ochie, nke Heron, bụ ndị a.
Ọrụ ahụ dị mfe.
Mmiri ahụ na-ada site na A ruo C (nke jupụtara na ikuku na ikuku) ma na-eme ka ikuku dị na C ruo B (jupụtara na mmiri), nke na-akwali mmiri ahụ A.
Ọfọn na onyonyo anyị nwere ọtụtụ valvụ ndị baara anyị uru maka ibido usoro anyị, ọ bụ ezie na ị ga-ahụ na enwere ike ịme ya ọtụtụ ihe n'ụlọ.
Dị ka foto ahụ dị. Na mbido, anyị mechiri valvụ atọ ma tinye mmiri na A. Anyị na-emeghe V2 na tank B ga-ejupụta ma mepee V3 ga-eweta ya na nrụgide nke ikuku. Anyị na-emechi valvụ abụọ ahụ ma mepee V1 maka isi iyi ịmalite ọrụ.
Nhazi na akwukwo akwukwo
Edeela m ihe dị ka akụkọ 500 n ’Ikkaro. Enwere m ike ịgwa gị na ahụrụ m ihe ịtụnanya, maka mgbagwoju anya ha, maka ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Ọnụọgụ abụọ na-agbakwunye igwe
Enwere m oge ụfọdụ vidio gbasara a Binary marble na-agbakwunye igwe o Ọnụọgụ abụọ na-agbakwunye igwe na marble
M na-akọwa otú o si arụ ọrụ, ọ bụ ezie na ọ dị oke mma na vidiyo abụọ ahụ.
Ihe ndebiri ndebiri iji wuo gia
Gụ Microsiervos, ahụrụ m na ha kwuru maka ngwa weebụ ebe anyị nwere ike iwepụta ndebiri maka iwu nke gia ma ọ bụ ... Nọgidenụ na-agụ ihe